14 megapixels | ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် iPhone 48 Pro ၏ကင်မရာများသည် ပို၍ထူလိမ့်မည်။ iPhone သတင်း
Jordi Gimenez | 28/03/2022 10:00 | iPhone ကို 14
iPhone 48 Pro မော်ဒယ်အသစ်များတွင် 14 megapixels ရောက်ရှိလာပုံရသည်။ ကျောဘက်ကင်မရာများအတွက် ပိုထူပါသည်။. နာမည်ကျော် Apple မှ လေ့လာသုံးသပ်သူ Ming-Chi Kuo က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက် Twitter ပေါ်ရှိ ၎င်း၏တရားဝင်အကောင့်တွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ၊ MacRumorsတယောက်ကတော့
နောက်ထွက်မယ့် iPhone 14 မော်ဒယ်မှာ မှန်ဘီလူးတွေက နည်းနည်း ပိုထူးခြားလာမယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကင်မရာများ၏ 25 MP သို့ ခုန်တက်သောအခါတွင် အာရုံခံကိရိယာ၏ ထောင့်ဖြတ်အလျားသည် 35 မှ 48% ကြား တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအထူထပ်တိုးလာမှုအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိမည်ဆိုလျှင်၊ အမြင့် 5% မှ 10% ကြားတွင် သိသိသာသာ တိုးလာပါသည်။
ဤသူကား Kuo ပေးပို့သောစာ၊ သင်၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်တွင်-
14 Pro/Pro Max ၏ ပိုကြီးပြီး ပိုမိုထင်ရှားသော အနောက်ကင်မရာအဖုအထစ်ဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကျယ်ပြန့်သောကင်မရာကို 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max ၏ 12MP) သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ 48MP ၏ CIS ၏ထောင့်ဖြတ်အလျားသည် 25-35% တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး 48MP ၏ 7P မှန်ဘီလူး၏ အမြင့်သည် 5-10% တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ https://t.co/lrwgmnLNce
- ing 錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) မတ်လ 27, 2022
လက်ရှိ iPhone 13 Pro မော်ဒယ်များတွင် 12 pro မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသော ရည်မှန်းချက် ကင်မရာများ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပို၍ သို့မဟုတ် လျော့နည်း တူညီပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ မှန်ဘီလူးများသည် iPhone ဗားရှင်းအသစ်တွင် အနည်းငယ်ပို၍ ထွက်လာပုံရပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအရည်အသွေးကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။ 8K အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။. ဤကိစ္စများတွင် အမြဲဖြစ်ပျက်နေသည့်အတိုင်း Cupertino ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါ ကောလာဟလများကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အခိုင်အမာဆုံးသောသူများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်နှင့် ဤ iPhone 14 Pro အသစ်ကို မိတ်ဆက်ချိန်တွင် အဆုံးတွင် ဘာဖြစ်မည်ကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန် အချိန်တန်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို 14 » iPhone 14 Pro ကင်မရာများသည် 48 megapixels ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ပိုမိုထူလာမည်ဖြစ်သည်။